Roller coaster lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Roller coaster lalao
ny ankizy tia ny mitaingina ny mitaingina. Fa ny sasany ihany no mamela iray taona. Raha toa ianao ka eo amin'ny tranonkala, tsy misy olona afaka handrara anao maimaim-poana amin'ny aterineto hilalao lalao-roller coaster. Izany no toerana ahafahanao hifalifaly fa tsy mba mamorona fitaka ny mitaingina eo amin'ny fiaran-dalamby, nidobodoboka be ny hantsana miolakolaka ny lalamby. Ianao afaka manorina ny lalamby ka nanjary tena hantsana. Zareo ka tsy BE LOATRA, raha tsy izany ny fiara dia tsy ho afaka hianika azy.
Lalao Rollercoaster tamin'ny Category:
Sanjay sy Craig
Ny tsara indrindra Roller coaster lalao
Ny hazakazaka ho an'ny-roller coaster
Hazakazaka amin'ny rollercoaster 2
Rollercoaster Mpamorona Express
Fanorenana ny-roller coaster 2
Nandresy tsary 2
Mickey eo amin'ny rollercoaster
Matoatoa amin'ny coaster-roller
Roller coaster: Ny Revolisiona
Car tsary: ​​Ny lalana Jack
Mampangitakitaka Rush 5
Ny saka ao amin'ny satroka dia mahafantatra zavatra betsaka momba izany! Marbleous gaga coaster
Rollercoaster: Zavatra tsy zavatra
Kogama: World Rollercoaster
Tweet Ruff-Ruff ary Dave Super Slide
Billy sy Mandy: Roller coaster
Sanjay sy Craig: Faly High - Rollercoaster
Créez votre coasters-roller coaster
Io fiara manome anao ny coaster-roller lalao
Lalao Online Rehetra Roller coaster lalao
Rides, tsara tarehy, voly zaridaina – Izy io dia toerana tena ny ankizy sy ny tanora olon-dehibe izay tia ny fahafinaretana. Eto izy ireo hihaona misy Carousel, efitrano sy ny efi-trano ny hehy tahotra mamy, olona mpanao hatsikana, balaonina, mitifitra lalan-tsarany, mitaingina ary, mazava ho azy,-roller coasters – nisongadina, izay manintona sy mahafinaritra ho an'izay rehetra tia ny thrills.
Games Rollercoaster – fialam-boly ho an'ny mahery fo
lamasinina fifaninanana eo amin'ny lalamby amin'ny hafainganam-pandehan'ny breakneck fotsiny any an-danitra, manao mikiakiaka sy nefa tamin'izany andro izany mba hidera. Na mijery fotsiny ny hafainganam-pandeha izay ny mpandeha mitaingina ny tavany, dia lasa mampatahotra.
Maro ny olona tsy haharitra toy izany ny fahitana, fa namela ny filaharana, fa tsy sahy ny hiaina toy izany manan-karena isan-karazany ny fihetseham-po avy amin'ny zavatra niainany. Izany mitaingina no mampidi-doza, ary noho izany dia manana taona ahafahana. Raha toa ianao ka mbola tsy taona, raha avela matahotra, dia tsara indrindra ny hijery ny lalao-roller coaster, izay ho afa-po, ary ny lalàna dia ho hajaina. Indrindra fa ankoatra ny tia manao ski ambony, misy ihany koa ny nanome ho an'ny tena-fanorenana ny lalana, izay manidina eo amin'ny loha masiny.
Aoreno ihany-roller coaster
Nahita andry ity, dia afaka mifidy ny fitarihan'ny ny gameplay. Liana tamin'ny fahafahana hanao ny mari-roller manokana coaster? Avy eo mandalo fohy Mazava ho azy fa sarotra ity raharaha, ka miroso amin'ny tetikasa.
Moa ve ianao manana karazana Mpamorona – mivantana lamba fotsy, maty tadivavarana, toe-javatra. Azonao atao ny manaraka ny torolalana ianao nitsidika teo aloha, ary afaka maneho eritreritra sy tonga amin'ny ny famolavolana. Fa tsy BE LOATRA amin'ny hantsana fidinana sy nifandimby, raha tsy izany ny lamasinina na tsy afaka hiakatra eo amin'ny trano, na tsotra fotsiny hirodana ho any an-lavaka tsy hita noanoa.
Ataovy mitovy tantana ny mihetsika dia hijery toy ny mankaleo diany, ary izany dia tsy mba tahaka ny mpizaha tany, izay tonga eto ho ny fientanam-po. Fa raha ilay dia nahomby, dia ho tia ny olona, ​​ary misy ny fanehoan-kevitra, dia ho hitanareo ny vita ny kely mandeha.
izahay sariitatra namana litera
Anisan'ny mpankafy-roller coasters, ho hitanao Disney litera, ary indrindra ny totozy Mickey sy ny namany, ary koa ny Phineas sy Ferb – mihetsiketsika foana ireo mpamoron-tsain sy fidgets. Dia nanapa-kevitra ny hamorona fitaovana am-boalohany fialam-boly, ary nihevitra ny tenany manintona ho injeniera lehibe sy ny mpamorona. Ny fahafantarana impiry izy roa lahy tonga any olana amin'ny famoronana, ny tahotra ho amin'ny fiainan'ny mpizaha tany. Raha tsy tianao izy ireo mba hampitahorana ny olona, ​​ampio izy ireo hiatrika ny asa.
Afaka milalao lalao rollercoaster sy ny fitantanana ho an'ny fitaterana ny mpamily. Tsy fanarahan-dalàna lalamby manao natahotra kokoa, ary hoe inona no ho ny manaraka kosa, fa tsy hahita azy tena. Diso dingana iray ary kivy marina eny an-dalana. Eny ary, fa lalao fotsiny, ary ny ratsy indrindra izay zavatra hitranga dia ny fiafaran 'ny lalao. Fa afaka foana manomboka indray ary toy izany hatrany mandra-dia, ireo mandra-lasa soa aman-tsara ny lalana rehetra.
Ny ivelany ny gameplay
rehetra lalao – fa tena sarotra tsy mba hanesorana ny mpandeha, fa koa eo amin'ny fahaizana ny mpamorona ny toy izany sarotra manintona. Indraindray ny fandaharam-potoana tsy misy hafa mahafinaritra manokana, ary aseho amin'ny fisaka. Etsy an-daniny ny sary tsy mitady izay tena manintona, fa miasa miaraka Mora kokoa.
Fa ao amin'ny horonam toerana ny mifanohitra – hevitra tsara tarehy manome fahafinaretana, fa ny araka ny tokony ho mampifandray ny tsipiriany rehetra ilaina mba handinika ny rafitra avy amin'ny fijery, ka nampiharihary zavatra hafahafa amin'ny fomba ara-potoana. Explore misy tolotra rehetra, ary hahita ny tena mety aminao mba hahazo ny tena fahafinaretana ny lalao.